Forum serasera malagasy Mitorona izao isika.... - Dinika forum.serasera.org
Mitorona izao isika....
Fitohizan'ny hafatra : Mitorona izao isika....
BlackGasy - 22/04/2009 07:12
Tena mahamenatra sy mahakivy ny fivoarana eto amintsika amin'izao tsy hilaza afa-tsy ireto zavatra vitsivitsy ireto aho
- TVM miverina any amin'ny taona tsy haiko ny fijery azy sary sy feo tsy miaraka hafa ny teo aloha sady nireherehany hoe: TVM amin'ny endriny vaovao fa izao tsy izany intsony fa mahamentara eh!!!
- Colonel angamba no faratampony amin'ny Grade miaramila eto Mada CEMGAM MINISTRE sns eh! rehefa kelikely angamba CAPORAL indray.
- Lafin'ny Fampianarana ny olona te hivoatra ny @ izao fampianarana miverina any amin'ny taona tsy hay mampalahelo eh!
Ka miantso anao aho hoe ho entina ho aiza ity firenentsika ity raha ho toy izao hatrany.
Mandefitra - 22/04/2009 07:17
Tsy maninona io fa reveo .. fozaorana zao no mitondra ny tanana.
xxx - 22/04/2009 07:25
toerana ifandimbiasana io de refa avy mitondra ny voay de aleo mba raisin'ny foza ndray e
Oay - 22/04/2009 07:45
Fitondrana tetezamita io fa tsy haharitra ka izay mahatsapa fa mpanao politika manantsaina sy mahatoky tena fa afaka manova izao zavatra izao d mandehana miady hevitra eny ambony latabatra hanganana ny repoblika vaoÂ²! d resena eny @ fifidianana ny mpanao ny tsy rariny!
Mandefitra - 22/04/2009 10:14
Gazety Taratra (*) : Ahoana ny fijerinao ny toe-draharaha ankapobeny eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ?
Atoa Niels Marquardt (-) : Tsy misy ny fandriampahalemana ! Miaina ao anaty savorovoro indray ny firenena taorian’izay herinandro maromaro toa somary nilamina izay. Mandeha ny fandrahonana etsy sy eroa, fantatra ny fisian’ireo nahavita heloka nivoaka ny fonja nefa tsy nahazo fampihenan-tsazy. Manjaka ny tsy fandriampahalemana !
* Ny fahitanao ny asan’ny Fahefana avon’ny tetezamita (Hat) nandritra izay iray volana katroka izay ?
- Amiko aloha tsy ara-dalàna ny fisian’ny Hat, izay niainga avy amin’ny fanonganam-panjakana nataon’ny miaramila. Ny tenako no vavolombelona amin’izany teny Antenimena ny andron’ny 17 marsa. Tsy tokony ho noravana ny Antenimiera roa tonta ary nandeha ila ny fanaovana ilay fihaonambem-pirenena.
* Malaza ho manohana ny Filoha teo aloha sy ny fitondrany ianao.
- Tsy marina izany. Ho anay dia ny Lalampanorenana ihany ! Nametraka ny raharaham-pirenena tao anaty korontana Ravalomanana. Raha niala izy dia tokony ny Filohan’ny Antenimierandoholona no namindrany fahefana. Izahay anefa tsy miara-miasa amin’izao fitondrana ankehitriny izao. Miankina betsaka amin’ny fanampiana avy any ivelany i Madagasikara ka miteraka olana lehibe ho an’ity firenena ity ny tsy fanarahana ny rafitra ankatoavin’izao tontolo izao.
* Ho anao izany, tena niala tsy ho Filoha intsony Ravalomanana ?
- Nametra-pialana tokoa izy !
* Ahoana àry no tokony hivoahana amin’izao krizy izao ?
- Tokony hatao alohan’ny faran’ity taona 2009 ity ny fifidianana Filoham-pirenena. Tsy hevitray amerikanina irery izany fa itovian’ny fikambanana iraisam-pirenena maro. Misy olona avy any ivelany afaka hiasa hanao fanadihadiana rehetra ho fanomanana izany, toy ny fandrafetana ny lalàm-pifidianana, sns. Ny fihaonambem-pirenena tokony ho eo ambany fiahian’ny rafitra mahaleo tena iray, toy ny Raiamandreny na fiarahamonina sivily. Tsy tokony hataon’ny Hat ambanin-javatra izany. Tombontsoa lehibe ho an’i Madagasikara ny fahavitana azy.
* Raha tsy tanteraka alohan’ny faran’ny taona izany dia ahoana ?
- Heveriko fa azo atao tsara. Fahavoazana lehibe ho an’i Madagasikara raha tsy tanteraka. Ny fitondram-panjakana amerikanina manokana, mamatsy vola eo amin’ny 100 tapitrisa dolara isan-taona, mbola eo ny Agoa. Mety ho tapaka daholo ireo miampy ny fanampiana avy amin’ireo firenen-kafa.
* Ianao ve nangataka fihaonana tamin’Atoa Manandafy Rakotonirina sa izy no niantso ?
- Izy no niantso ahy ! Saingy tsy mbola nisy ny fihaonanay noho ny toe-draharaha ankapobeny tsy milamina.
Mandefitra - 22/04/2009 10:18
Hanaiky an io ve ny Fozaorana : valiny tsia.
Ny hizesta fa tampoham-pahefana no nahamaika azy.
Ny tahotra andra8 no nameno ny lohany.
Ny hanapotika ny TIKO no vaindohan-draharahany.
Iarivo moa tsy laizako ntsony.
Ary tsy ho voafehiny intsony ireo tafika loham boto toa azy ireo.
Page rendered in 18.9213 seconds